sheekada samsam maxaa kajira
mohamd A/ramham ismail (hamdi)
ilaahay ayaa mahadle nagu simay bisha barakaysan ee ramadaan inaynu soo gaadhno , salaan iyo nabad gelyana waxay u sugnaatay rasuuliika sharafta le mohamed (c.s.w).
waxa baryahan danbe isa sootaraya anba sheeko laga dhigtay arinta samsam ahmed ee ku xidhan maagalo madaxda hargeisa taas oo aad moodo inay bogoga qaarkood ka dhigteen wararka ugu muhiimsan ka dib markii ay ka soo jeesteen shirkii somaliya uga socday kenya .
hadaba waxa is waydiin mudan ma mudan tahay in qof laga shakiyay oo ay polisku qabteen la buunbuuniyo , inaga oo ogsoon in caalamka inay shaqada polsiku tahay inay ilaaliyaan amaanka dadkooda iyo masuuliyiinta qarankaba ,taana aanu ugu hanbalyaynayno poliska somaliand ,mise sheekadu waxay noqotay mid looga faa iidaysto in lagu dacaayedeeyo dowlada somaliland oo meel lagaga soo qabto la garan waayey . taa waxa kasiidaran bogoga somalia qaarkood oo abaar warlaani heshay kuwaas oo war ka dhigta inanyar ayaa la fara xomeeyay iyo cadaawad ayaa nalagu hayaa!!
arintan oo ay dad badani aad moodo inay uga faaiiday sanayaan sidii ay u kala fogayn laahyeen labada omadood ii jaarka ah ayaga oo ku tilmaamaya in samsam u xidhan tahay qabiil iyo diin iyo cadaawad taas oo ay somaliland ay ka soo gudubtay bari hore.
hadaba waxa fiican inay ogaadaan dadka sheeko ka dhigtay arinta samsam ahmed iyo akhristuuba arimo ay ugu muhiimsanyihiin :
1. inay arinta samsam ahmed khaas u tahay poliska somaliland oo ay ka masuul yihiin sidii ay u ilaalin lahaayeen amaanka shacabkooda ,aanay xidhi karaan waraysan karaan qofkasta oo ay ka shakiyaan ha ahaado somalilander anba somalian, ayaga oo ilaalinaya xuquuqda binu aadamka leeyahay.
2. In maxkamad cadaalada la soo joojin doono samsam ahmed, taas oo ka saari doonta dadka inay arintu tahay waxaan modow modwo ku jirin .
3. waxyaabo bodan oo dadbadani iska dhaadhiciyeen inaanay waxba ka jirin sida inay arintani la xidhiidho qabiil iyo cadaawad iyo diin , taas oo somalia maanta sidaa soo gadhsiisay, una qalmin in somaliland lagu tilmaamo.
4. arinta ku saabsab ka xadgudubka samsam in la buunbuuniyay sal iyo raadna lahayn. waayo dadkii loo saaray arintaa ayaan ilaa imka soo cadayn wax loo gaystay samsam.
hadad dib ugu noqoto waxa lagu soo qoroyo bogogo internetka waxa kuu kala cadaanaysa sida waxaan jirin looo samaysatay taas oo ay kuu cadaynayso inay qaar ku leeyeen waxay jirtaa 16 , 17 ,18! taas iyo arimo kale waxay ku tusi karaan arintan inaanay lahayn waji iyo meel loogu soo hagaago oo aan ahayn inaynu sugno waxa ay ka yeesho maxkamadu.
ugu danbaystii waxaan leeyay shacabka somaliland iyo umada islaamkaba ramadaan kariim iyo cibaado suuban.
mohamed A/raman ismail (hamdi)
sana,a - yemen